IBhodi yokusika, iBhodi yeCharcuterie, Izixhobo zeKhitshi- Uhlobo lwebridge
Umququzeleli weDrawer omnyama
Uhlobo lwebridge BambooCustom Flatware Drawer Organ ...
Ihowuliseyili Premium Bamboo Ityesi Organiser ...
Ihowuliseyili Bamboo Ityesi Umququzeleli (7-9 kwiindawo zokubeka) B ...
Ihowuliseyili Kitchen Utreil Umququzeleli, Bam ...
Uhlobo lweBhulorho yoQiniso lweBambo yoTywala kwiKhitshi yaseUtensi ...
Ihowuliseyili Yempahla Ityesi Umququzeleli, Zenzele Tra ...
Isitayile seFujian Bridge Furnishings Co., LTD yi-e-commerce ejolise kwi-BAMBOO kunye ne-WOOD yabathengi beemveliso zabathengi ngeemveliso ezahlukeneyo, kubandakanya iKhaya kunye neKhitshi, iGadi kunye neNgaphandle, iiPet Supplies kunye neeMveliso zeOfisi. Inkampani ihambisa iimveliso zayo ikakhulu kubathengisi baseAmazon kulo lonke elaseMntla Melika naseYurophu.
Emva kweminyaka elishumi yophuhliso, ifektri yayo inabanini bayo i-8000 yeemitha zesikwere kwaye iqinisekisiwe nge-BSCI, i-FSC, i-ISO9001. Kule minyaka ili-10 idlulileyo, inkqubo engqongqo yolawulo lomgangatho kunye nenkonzo egqwesileyo yenza ukuba iFujian Bridge Style Furnishing Co., Ltd isebenze ngaphezulu Abathengisi abayi-1000 beAmazon kwaye bagcina ukusebenzisana kweshishini ixesha elide kunye nenzuzo.
QC kunye noLawulo loMgangatho
Siza kudibanisa zonke iimpahla kwigumbi lethu lokugcina izinto, emva koko senze uhlolo olusemgangathweni kwindawo yokugcina izinto, kwaye sikubonelele ngengxelo yohlolo lobungcali. Ukuba uthenga isampulu, siza kuqala kuphela kwimveliso emva kobungqina bakho. Iinkcukacha ziyafana nesampulu yo ...
China Bamboo Kitchenware lehoseyile
I-China Bamboo Kitchenware Ihowuliseyili-Khetha iimveliso ezingama-2021 ezikumgangatho ophezulu zeBlue Kitchenware ngexabiso elihle kubavelisi bokuphumeza ikhitshi laseTshayina. Uhlobo lweBhulorho lubonelela ngento eyahlukileyo yoyilo: Umququzeleli weDraw ye-Bamboo ukusika ibhodi yokusika i-bamboo charcuterie cheese server & nb ...
Isampuli yokubuyiselwa kwesampulu kathathu kunye ne $ ...
Uhlobo lweBhulorho Yenza iNyuselo eNtsha: 1.Umbuyiselo mali weOrder amaxesha ama-3 wentlawulo yesampulu (ngaphandle kwentlawulo yokuthumela). 2.Order isaphulelo $ 100 Into nganye. Unokukhetha enye yale misebenzi ingentla ibhodi yokusika i-bamboo / umququzeleli wedraw ye-bamboo / ibhodi yeshizi ye-bamboo / i-bamboo kitchenware / ugcino lwasekhaya